Cayayaanka cayayaan (sp Tetranycus.) ~ Jual Website Iklan Baris CMS Siap Pakai Dengan Harga Murah
Cayayaanka cayayaan (sp Tetranycus.)
Cayayaanka cayayaan (sp Tetranycus.)Cayayaanka Cayayaanka aad u yar tahay, qaabeeya sida caarada iyo mid yihiin polyfag, taas oo saameyn ku dhowaad dhammaan noocyada dhirta. Cayayaan dadka waaweyn lagu qiyaaso ku saabsan 1 mm. Cayayaanka caarada firfircoon inta lagu jiro maalinta. Wareegga nolosha ee ku ridaysa buuxiyaa inta u dhexeysa 14-15ituDomino.com JUDI DOMINO, AGEN DOMINO, AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA maalmood. Cayayaanka Mite weerarka iyo dhirta miraha masduulaa nuugo stem dheecaan ama laan. Sidaas darteed, dushiisa of jilif ama laamihiisa dhirta qaba cudurka muuqan doona dhibco ama buni huruud ah. Weerar culus oo u keeni doonaa dhirta miraha masduulaa aan caadi ahayn u kora.Maamulka cayayaan Mite ku beegnayd waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo cayayaan dilaha botanical ku xereen 3-4 maalmood, sida neem, Tagetes, dhagax yakintos biyo, ama inta hirku. Si aad u soo kabtaan cayayaanka cayayaanka yaryar ee dhirta la siin nafaqooyinka laga itaal, oo mara xididada (via pengocoran), ama jidhka geedka (by moobeyl).
Whitefly, Cayayaanka (Bemisia tabaci)Mid ka mid ah cayayaanka wayn waxaa miraha masduulaa whitefly. Cayayaan dadka waaweyn doona booskii lagu qiyaaso 1-1.5 mm, oo cad, iyo daboolay lakabka ah ee baalasheeda wax qaasin. Cayayaan dadka waaweyn sida caadiga ah loo habeeyo dushiisa of laamaha hoose. Haddii geedka waxaa inta badan taabtay cayayaanka duuli doonaa sida ceeryaamo (whitefly caddaan). Astaamaha whitefly weeraro on dhirta miraha masduulaa gartaa dhibco necrotic sabab u tahay dhaawaca ku unugyada iyo unugyada dhirta on jir ama laamihiisa ay saameeyeen. Foomka whitefly Digo malab ah in uu yahay meesha caaryada madow dhexdhexaad ah koritaanka sooty. Tani waxay keentaa in geeddi-socodka aan caadi ahayn ee photosynthesis qaadataa meel. Intaa waxaa dheer in ay waxyeelo toos ah dalagga, whitefly cayayaan cayayaanka waa mid aad u halis ah maxaa yeelay waxa ay u dhaqmo sida a fayrusyada warshad dulinka ka dhasha. Khasaaraha ay sabab u weerarkii whitefly gaari karto 20-100%. Ilaa hadda, waxaa jiray 60 nooc oo fayraska Tanoo kala qaado by whitefly ah.Cayayaanka Whitefly ku beegnayd sanadkii la samayn karaa in dhaqanka farsamo, ie codsanaya habka aaladda wax-beerto (codsiga ee dalagga dabin). Dalagyada Trap lagu dhex beeray kartaa agagaarka of beerashada si ay u foomituPoker.com JUDI POKER, AGEN POKER, AGEN SITUS TARUHAN BANDAR JUDI POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA ka ku heeraaray, cufan. Dhirta Qaar ka mid yihiin ku ool ah loo isticmaalo sida cayayaanka whitefly dabin, iyo kuwo kale, galley, sunflowers, digir, iyo chickpeas. Waxa intaa dheer in arjiga of beerto aaladda wax, yaranta waa in la sameeyaa si joogto ah. Haramaha ka iman kara sida whitefly martida ah.Si loo yareeyo tirada dadka cayayaanka ka fulin karaan rakibida dabin dabin jaalle ah sida ugu badan 40 gogo '/ ha. Control noolaha waxa lagu samayn karaa by faa'iidaystaan ​​colka dabiiciga ah ee cayayaanka whitefly, iyo kuwo kale, sida soo socota:
Bahal bahal yar Sexmaculatus Menochilus (Coccinelidae) kaas oo ay leeyihiin wareegga nolosha ee 18-24 maalmood ah ku leeyihiin awoodda duui'sadaan badan sida 200-400 nymphs whitefly badhidii. The kuwa lamid ah dhedig yihiin awood u soo saara sida ugu badan 3,000 oo badar ukunta.
Encarcia formosa parasitoids, mid ka mid badhidii ukunta cayayaanka sida dheddigga yihiin awood u soo saara 100-200 oo ukun.
Cayayaanka ku xereen sida geedka neem, Tagetes, dhagax yakintos biyaha, cawska badda ama waa in la sameeyaa si joogto ah (bareeg Sababta
SenangPoker.com Agen Judi Poker Online Terpercaya Indonesia5. Dhirta la goostay in la ubax doonaa at da'da 1.5-2 sano iyo in la goostay karaa marka ay gaaraan da'da 30 maalmood ka dib miro masduulaa mekar.Tanaman ubaxa dhali doontaa miraha si joogto ah ilaa + 10 sano.